खुशीको खबर : मलेसिया जादा अब क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
खुशीको खबर : मलेसिया जादा अब क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने ?
कतिपय खाडीका देशले को’भिड खोप लगाएका विदेशी कामदार क्वारे’न्टाइन बस्नुपर्ने व्यवस्था नै हटाएका छन् । कतार, साउदी, यूएई, ओमान, कुवेत र बहराइनले आफ्नो देशले मान्यता दिएको खोप लगाएका विदेशी कामदारले क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने व्यवस्था हटाएका छन् ।
यो भन्दा अगाडि खाडीका देश जाने कामदारले दुईतिर गरी करिब २८ दिन क्वारे’न्टाइन बस्नुपर्ने व्यवस्था थियो । रोजगारदाता देशमा पुगेपछि १४ दिन र नेपालमै १४ दिन अनिवार्य क्वारे’न्टाइन बसेपछि मात्र खाडीका देशले प्रवेश अनुमति दिने गरेका थिए ।
योभन्दा अगाडि खाडीका देश जाने नेपाली कामदारहरूले ७२ घण्टाअघि को’भिड परीक्षण गराई नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि मात्र प्रवेश अनुमति पाउने गरेका थिए ।
खाडीका देशले को’भिड खोपका लगाएका विदेशी कामदारले सम्बन्धित देश प्रवेश गर्नुअघि कोरोना परीक्षण गर्ने प्रक्रियालाई समेत खुकुलो बनाएका छन् । खाडीका देशको यो निर्णयले नेपाली कामदारलाई रोजगारीमा जान सहज मात्रै भएकाे छैन खर्चसमेत कम भएकाे छ । भेरोसेल, को’भिसिल्ड, एस्ट्राजेनेका र जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप मात्र नेपालमा लगाइन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा भने सरकारले जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप लगाउने भने पनि सहजै उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
जसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कामदार खोप समयमा नपाउने समस्या भोगिरहेका छन् । खाडीका देश र मलेसियाले जस्तै युरोपका देशले समेत विदेशी कामदारका हकमा क्वारे’न्टाइन बस्नुपर्ने व्यवस्था हटाएका छन् ।